WARBIXIN: Neymar,Mbappe,Verratti & 7 Xiddig Oo Ay Real Madrid Doonaysay In Ay Kala Soo Wareegto PSG – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Spain, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: Neymar,Mbappe,Verratti & 7 Xiddig Oo Ay Real Madrid Doonaysay In Ay Kala Soo Wareegto PSG
WARBIXIN: Neymar,Mbappe,Verratti & 7 Xiddig Oo Ay Real Madrid Doonaysay In Ay Kala Soo Wareegto PSG
Kooxda Real Madrid ayaa jecel in ay xiddigba xiddiga uu ka fiican yahay kooxdeeda ku soo darto waxana jira 7 xiddig oo haatan u ciyaara kooxda PSG oo ay kooxda caasimada Spain ka dhisan xiiso u qabtay sanadihii ugu dambeeyay.
Xiddigii ugu dambeeyay ayaa ahaa da,yarka Kylian Mbappe markii uu ku sugnaa kooxda Monaco xagaagii hore iyada oo heshiis afka ah la gaadhay si uu xiddigu ugu biiro Real Madrid 108 milyan oo euro iyo waliba 20 milyan oo guno ah.
Si kasta ha ahaatee Daqiiqadihii ugu dambeeyay uu Mbappe badalay maskaxdiisa isaga oo sii joogay France kuna biiray kooxda PSG isaga oo ugu biiray heshiis amaah ah oo uu si joogto ah ugu biirayo dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Xiddiga lamaanaha la ah ee Neymar ayaa sidoo kale ah xiddig diirada u saaran Los Blancos muddo dheer xilli madaxweynaha kooxda ee Florentino Perez xiiso wakhti dheer ah u qabo xiddiga tan ilaa 2013 markaas oo uu xiddigu ku biiray Barcelona.
Kadib markii uu ku fashilmay in uu saxiixiisa helo Florentino Perez ayaan wali iloobin xiddiga iyada oo haatan lala xiriirinayo in uu isku diyaarinayo in uu mar kale nasiibkiisa ku tijaabiyo helitaanka xiddiga reer Brazil.
Xiddigaha kale ee ay kooxda Los Blancos xiisaha u muujisay ayaa kala ah Marquinhos, Thiago Silva & Marco Verratti kuwaas oo ay Real dhamaantood la xiriirtay wakhtiyadii la soo dhaafay.
Gaar ahaan xiddiga khadka dhexe ee reer Italy ee Verratti ayuu si khaas ah u bartilmaameedsaday tababare Carlo Ancelotti markii loo dhiibay shaqada tababaranino ee kooxda sanadkii 2013.
Mar kasta kooxda caasimada France ayaa diiday kooxda Real Madrid in ay ka iibiso xiddigeheeda ugu fiican kuwaas oo ay hor istaagtay dhawr dalab.
Ugu dambayn xiddiga daafaca uga ciyaara ee Thomas Meunier ayaa ahaa xiddig sidoo kale diirada u fuulay kooxda Real Madird iyaga oo doonayay in ay ku buuxiyaan daafaca reer Brazil ee Dinlo oo xagaagii ku biiray kooxda Man City.
Sidoo kale daafaca Layvin Kurzawa ayay xiiso dhab ah u muujiyeen iyaga oo sidoo kale doonayay in ay booskiisa ku buuxiyaan xiddiga Fabio Coentrao kaas oo ku fashilmay in uu kooxda ka helo boos joogto ah.